BEERIDDA GUUL LEH EE QAJAARKA EE JIILAALKA ON WINDOWSILL AH - BEER CAGAARAN
Dhiroonka qorraxda daaqadaha xilliga qaboobaha - tani ma aha wax maskaxeed, laakiin xaqiiqda, oo lagu abaabulo guriga beeralayda. Laakiin tani waa suurtogalnimada marka la isticmaalayo noocyo khaas ah oo qajaarka ah ee sii kordhaya ee xilliga qaboobaha ee guri dabaq ah oo raacaya dhammaan xeerarka daryeelka iyaga.
Noocyada qajaarka ee daaqadaha
Sababtoo ah shaqada degdega ah ee jajabyada maanta, ninkii beerta oo idil wuu iibsan karaa miraha qajaarka, kuwaas oo awood u leh inuu koro oo midho u dhasho xataa xitaa xaaladaha gudaha. Kuwan tirada qajaarka sida koraya daaqada xilliga jiilaalka, waxaa ka mid ah:
qajaarka "Dareemo" - noocyo kala duwan oo ay ku kala duwan yihiin xilliyada bislaado ee ugu dhakhsaha badan (xilliga ugu yar ee Bisaylkiisa ugu yaraa marka lagu koriyo aqalka dhirta lagu koriyo waa 36 maalmood), miraha fiicani iyo cagaarka weyn (illaa 15 cm dhererka iyo 3 cm dhexroor);
Cucumber kala duwan "Shchedryk" waxay ku rareysaa 45 maalmood gudahood laga bilaabo xilliga abuurista miraha, laga bilaabo 5 illaa 8 cagaarka waxaa la sameeyaa meel kasta oo ka mid ah baadiyaha, mid kasta oo ka mid ah ilaa 12 cm dheer; marka ay ku koraan gudaha gudaha, baadiyaha kasta waxay soo saartaa ilaa 20 cagaaran;
kala duwan "Khutorok" waxa loola jeedaa sida ugu dhakhsaha badan Bisaylkiisa, tan iyo miraha ugu horeeya ee laga soo qaadi karaa 30 maalmood laga bilaabo wakhtiga beero; Zelentsy waxaa lagu gartaa dherer 10 cm iyo joogitaanka thorns black, iyo sidoo kale dhadhan aad u fiican;
qajaarka kala duwan "Hrustik" daadi ku filan - 50 maalmood ka dib beereed, laakiin xitaa marka koray daaqad la mid ah baadiyaha waxay qaadan kartaa ilaa 40 miraha, laakiin markaad beertid noocyo kala duwan, maskaxda ku hay in ay adagtahay, sidaas darteed waxay u baahan doontaa meelo badan;
fasalka "Masha" sidoo kale hore - caleemaha ugu horeysa waa la goyn karaa 35-40 maalmood ka dib beerashada; Qoryaha dhirta ee dhirta ayaa si aad ah u qarinaya, on biqil kasta 5-7 cagaarka oo ku saabsan qiyaas ahaan 11 cm dhererka waxaa la aasaasay;
qajaarka "Prestige" Marka laga reebo precocity iyo dhadhan fiican, waxay yihiin 8-10 cm dheer oo ku kala duwan ee Bisaylkiisa aan isku mid ahayn ee miraha, sababtoo ah fruiting kaas oo socon kara muddo bil ah.
Waa muhiim! Wixii beeridda daaqada daaqadda, waxaad dooran kartaa noocyo kale oo Bisaylkiisa hore ah ee qajaarka, tixgelin kaliya in ay tahay inay noqdaan parthenocarpic. Waxay ku saabsan tahay karti u lahaanshaha miro iyada oo aan lahayn pollination iyo self-pollination.
Awoodda qajaarka sii koraya guriga
Qajaaradu waxay dareemi doonaan fiicnaan marka ay ku koraan dheriyo shakhsi ahaaneed iyo sanduuqyo waaweyn, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo beerashada geedo. Tixgeli kaliya xaqiiqda ah in ay jirto daloolka sanduuqyada si loo sii daayo qoyaan xad dhaaf ah.
Markaad abuurto sanduuqyada sanduuqyada, maskaxda ku hay in aan ka badnayn 5 duurka qajaar ah waa in lagu meeleeyaa fogaan ah 70 cm. Sanduuqa waa in uu ahaado mid ballaaran oo ku filan, maadaama geedkan uu leeyahay nidaam xidid adag oo adag. Tani waxay dhalinaysaa iftiin beereed ku filan, iyo sidoo kale badbaadinta caleemaha dhalinyarada ka soo jeeda xad-dhaaf ah.
Horumarka caadiga ah ee qajaarka on windowsill, mugga ee dheriga waa in ay ku saabsan 4 litir geedka. Markaad diyaarinayso sanduuqyo iyo dheriyo, fadlan ogsoonow in qoto dheer ay tahay in ay ku filan tahay in la saaro lakabka dheecaanka hoose. Tan iyo dhumucda qoyaanka ee qajaarka ee qajaarka gaari karo 3 cm, awoodda waa in aysan noqon mid aad u yar.
Caarilka qajaarka sii kordhaya
Kobcinta wanaagsan ee qajaarka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya marka la beeray dabacsan oo si caddaalad ahna ciidda. Ujeedadaas, waxaad ka iibsan kartaa substrate ciidda dukaanka ubaxa (universal ama si gaar ah loogu diyaargaroobo ciidda loogu talagalay dhirta bocorka waxay ku habboon tahay beerashada qajaarka).
Haddii ay jirto fursad, ka dibna waxaa wanaagsan inaad diyaariso isku dar ah ciidda qajaarka si madaxbannaan, isku dheelitirnaanta isku dheelitirnaanta:
ciid (si aan caadi ahayn, ka dibna ciidda waxay noqon doontaa mid badan oo shaki leh waxayna u fiicnaan doontaa in laga gudbo qoyaan);
balka (waa suurad wacan in ay haystaan ​​waqti ay ku wareegaan oo noqdaan madow).
Ka hor inta aan beero miraha, waxaa muhiim ah in jeermiga dhulka lagu diyaariyo, taas oo loogu talagalay 20 daqiiqo foornada la hor dhigo + 200˚S. Tani waxay sababtay, ciidda ma jiri doonto cayayaanka cayayaanka ama bakteeriyada awood u leh inay keenaan cuduro kala duwan oo qajaarka ah.
Waa muhiim! Ka hor inta aan beero miraha, ciidda waa in la dhigaa sanduuqyada iyo dheryaha dhowr maalmood oo dheeraad ah ka hor beerashada loogu talagalay. Taas awgeed, wuxuu awoodi doonaa inuu sujuudo, oo abuurka ka dib wuxuu beertaa ma fuuli doono, geedo ayaa soo bixi doona si deg deg ah.
Diyaarinta abuurka qajaar
Noocyada qajaarka badankood waxaa lagu beeray si toos ah oo si qallalan loogu beeray dhulka furan. Si kastaba ha ahaatee, kiiskan, caleemaha ugu horeysa waxay u muuqan doonaan 2-3 maalmood, dalagyada qudhuna waxay yeelan doonaan si adag, si ay mar dambe loo beeray.
Tan iyo markii guriga ma jiraan meelo badan oo geedo ah, waxaa lagula talinayaa in biqil miraha qajaar ka hor, kaas oo la samayn karaa sida soo socota:
Ku qooji abuurka xal daciif ah oo kiriim ah 30 daqiiqo, kadibna biyo raaci biyo.
Waxaan ujirnaa abuur 2-3 saacadood oo biyo ah oo leh heerkul aan ka badnayn +35 35S.
Markaan helnay miraha diiran, waxaan ku duuduubnaa joonyad dharbaaxo ah oo biyaha ku rideyna ku ridaan sida balka. Foomkan, waa in lagu meeleeyaa meel meeshaa oo ah heerkulka heerkulka lagu hayo +30 ˚S.
Ka dib 1-2 maalmood, caleemaha muuqan. Markaad degto, waxay diyaar u noqonayaan isla markiiba, sababtoo ah ma ogolaan kartid dhererka qaansiirta in ka badan 1 mm. Aad bay muhiim u tahay in la qalajiyo intaan la beeri.
Ma taqaanaa? Si kor loogu qaado iska caabin ah ee ay duurka qajaar si qabow, waxay ku daali karaa foomka abuur ah. Ujeedadaas, abuurka ayaa marka hore lagu qooyay biyo diirran, ka dibna foomka oo bararsan, ku duudduubay maro oo lagu meeleeyay qaboojiyaha (doorbidayaa qaboojiyaha naftiisa) 1-2 maalmood. Ka dib markaa, iyaga waa la beeran karaa, iyo geedo soo baxaa in ay xitaa ku hayaan daaqadaha daaqada leh heerkul ah +17 ˚C.
Beerista Cucumber Seeds
Beeridda abuurka waxaa la samayn karaa waqtiyo kala duwan, laakiin waxa ugu wanaagsan in la sameeyo tan marxaladaha, si caleemaha cagaaran cusub ayaa si joogto ah u dillaacsan guriga. Marxaladaha beereed waxay ku xiran yihiin isbeddelka koritaanka qajaarka on windowsill ah.
Haddii noocyada kala duwan ee Bisaylkiisa hore, waxaa lagu beerin karaa 20kii maalmoodba mar. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in muddadii u dhaxaysay November ilaa Febraayo, duurka qajaarku ma laha iftiin dabiici ah, maaddaama maalmaha bilaha ah ay gaaban yihiin, oo qorraxdu marna ma muuqato.
Marka laga beerto abuurka abuuray, waa in lagu dhajiyo ciidda si qoto dheer ah oo aan ka badnayn 1.5 cm, iyo waa in qoyan. Ilaa ay geedo qajaar ah oo ka muuqata dhulka kor ku xusan, weelasha leh waa in lagu hayaa filimka iyo heerkulka aan ka yareynin + 25 ° C.
Marka caleemaha ugu horreeya ay ka muuqdaan dhulka, filimka waa in la saaraa oo sanduuqa iyaga oo leh iyaga oo dib loo habeeyay windowsill, halkaasoo heerkulka uu noqon doono qabow - oo ku saabsan +20 S.
In beereedka abuurka qajaar ah waxaa jira nuance kale. Bannaanka u badan oo iyaga ku beeri for geedo ee dheriyo yar yar oo kala duwan, si ay u dambeeya geedo quusin galay weelasha waaweyn.
Doorashadani waa mid la aqbali karo, laakiin inta lagu jiro tallaalka transplantation geedo yaryar ayaa badanaa la waxyeeleeyaa. Si looga hortago tani, inta lagu guda jiro ku-tallaaliddu waxay ka wanaagsan tahay in ciidda laga soo qaado koobka, oo ay weheliyaan geedo. Xaaladdan oo kale, labada xididada iyo caleemaha dhirta ayaa ku sii jiri doona.
Waxaan abuuri karnaa xaalado qajaarka sii kordhaya guriga
Si ay qajaarka on the windowsill si ay u muujiyaan koritaanka wanaagsan, waa in loo dhigo oo keliya dhinaca koonfureed, sababtoo ah warshad this waa mid xasaasi ah ma aha oo kaliya in kulaylka, laakiin sidoo kale iftiin. Xitaa ka sii fiican, haddii aad leedahay balakoon kulul ee dhinaca koonfureed ee guriga, kaas oo iftiinka ka yimaad saddex dhinac oo hal mar ah.
Xaaladahaas oo kale, duurka qajaar ayaa kori doona xoogaa adag, caleemuhuna waxay yeelan doonaan midab madow, sida sariiraha.
Si qajaarku u iftiimiyo iftiin, waxay mar walba iftiiminayaan. Si aad tan u sameyso, waxaad isticmaali kartaa biolamps gaar ah, ama nalalka caadiga ah ee laydhka (ma'aha lagama maarmaan in la beddelo maalintii oo dhan, kaliya xisaabi wakhtiga firfircoonida si ay maalinta iftiinka qajaarka u socoto ilaa 15-16 saacadood maalintii). Si kor loogu qaado saameynta nalalka, waxaad ku xiran kartaa iftiinka iftiinka qajaarka - muraayad ama foormo. Ha iloobin inaad xirto duurka boodhka, taas oo u ogolaan doonta qof walba inuu ordo si uu u helo caddadka ugu badan ee nalka.
Sida nidaam heerkulka qajaarka sii kordhaya, laga bilaabo xilliga muuqaalka caleemaha koowaad, warshad waa in lagu hayaa heerkul ah +20 ° C Haddii heerkulka qolka uu ka sareeyo, ka dibna qajaarka ayaa u baahan doona in la siiyo waraabin joogto ah iyo buufin si ay qoyaanka uga soo baxaan duurka si aaney u engagin si aad u xoogan.
Waa muhiim! Marka koraan qajaarka on windowsill, tixgelin xaqiiqada ah in sanduuqa leh dhirta iyo xididdadiisa ay la qaboojin karaa laga bilaabo kolla daaqada qabow. Xaaladdan, qajaarka ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay jilciso ama joojiyaan sii kordhaya. Si looga fogaado hypothermia ee xididada, waxaa lagu talinayaa in la geliyo bacaha yar yar ee xumbo ka yar dheriyada iyo sanduuqyada qajaarka.
Daryeelka qajaarka guriga
Qajaarka daaqadaha, korriinka iyo daryeelka ayaa dalbanaya wax aan ka yareyn marka la beeray dhulka banaan. Waa arrin aad muhiim u ah in la abaabulo koritaanka duurka si aan haba yaraatee aysan u kala bixin, oo ay ka baxsadeenna waxay ku sii jirayaan qaro weyn.
Noocyo iyo dhir qoyan qajaar
Su'aasha, "Sidee si habboon u samaysaa qajaarka xayawaanka daaqada?" Waa mid aad u muhiim ah, sababtoo ah waxay ku xirnaan doontaa xoogga dalagga. Waa in la fahmo in xataa xitaa tiro badan oo ugxan ah on duurka, iyada oo leh koritaanka cufan ee caleemaha iyo iftiinka saboolka ah, waxay gebi ahaanba u burburin karaa iyo ma siin miro.
Sababtan awgeed, waxaa muhiim ah in la xiro qajaarka, siinaya walxo kasta si ay u koraan iyada dareenkiisa shakhsi ahaaneed.
Xaaladdan oo kale, taageerada qajaarka ee windowsill sidoo kale waa shey faa'iido leh, maadaama aysan mar walba ku habbooneyn in la sameeyo jardiinka leh lakabyada, oo ma aha aesthetically ku faraxsan.
Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in si deg deg ah u go'aansato naftaada haddii aad qallajiso qajaarka daaqadaha. Dhab ahaan, nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gaarto wax wanaagsan. Waxaa lagama maarmaan ah in la xoqdo qashinka qajaarka marka 4-5 caleemo soo baxaan, taas oo ay ugu wacan tahay koritaanka caleemaha ugu weyn uu joojin doono, laakiin dhinacyadu waxay horumarin doonaan, taas oo qaybta ugu weyn ee dalagga la sameeyay.
Waxaad xoqan kartaa caleemaha dhinaca, iyaga oo ku dhajinaya qiyaasta 2-3 qaybood, iyo sidoo kale joojinta kobcintooda xaashida 10aad. Marka la gooyo iyo xirashada, waxaa muhiim ah in aan waxyeelo caleemaha geedka, taas oo ah isha ugu weyn ee nafaqada. Laakiin anteenada ayaa si gooni ah looga saari karaa.
Qajamaha biyaha si joogto ah, ka hortagga ciidda ka qallajinta 5 cm, inkastoo ay sidoo kale muhiim u tahay duurka habka buufinta, sababtoo ah nooca qoyaanka ee guriga ayaa kordhi doona.
Haddii qajaarka lagu beeray si gaar ah loogu diyaariyey ciidda, markaa ma aha lagama maarmaan in la bacrimiyo. Xilliga jiilaal aad u xanaaqsan oo keliya ayaa duurka u noqon kara faleebo leh mawjadaha la marsado, kaliya waa in la gooyaa ka hor si loo yareeyo diirada saarista faleebada. Tirada dhar noocaas oo kale ah xilliga dhirta oo dhan ee noocyada qajaarka hore waa inaysan ka badnayn laba.
Ma taqaanaa? Dhiroonka ayaa si aad ah ugu jawaabaya nafaqada foliar iyadoo la adeegsanayo caanaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku darto (1 l) 20 g oo saabuun iyo 30 dhibcood oo iodine ah, waxaad ka heli kartaa daaweyn aad u fiican oo ka dhan ah cudurrada kala duwan.
Qajaarka soo go'aya
Waxaa lagula talinayaa in la jeexo cagaarka bisil ee duurka ku yaala windowsill isla markiiba kaddib marka ay qaan gaadhaan. Marka hore, markaa uma oggolaan doontid koritaanka xad-dhaafka ah ee miraha, iyo marka labaad, dardar-galinta koritaanka dadka cagaaran.
Haddii aysan oggolaanin qajaarka in ay koraan in ka badan 10 cm, ka dibna baadiyaha waxay u badan tahay in ay mar kale bloom (ama ugu yaraan caleemaha dhinaca Bloom), kaas oo dhalin doona dalagga kale.
Waxaa xusuus mudan in noocyada ugu badan ee qajaarka hore ee daaqadaha daaqada yihiin ku haboon ma aha oo kaliya isticmaalka cusub, laakiin sidoo kale salting. Si kastaba ha noqotee, wax-soosaarka daaqada ee daaqada ayaa si dhif ah u saamaxaya si ay u oggolaadaan dalagga soo-baxa in la geliyo gasacadaha.
Laakiin weli, si ay u bixiyaan fursad ay ku koraan qajaarka cusub ee dhexe ee xaq u qaboobaha jiilaalka on windowsill ma u qalantaa. Waxa kaliya oo muhiim ah in la siiyo dhirta iftiin ku filan oo aan la ilaawin waraabinta joogtada ah. Thanks to this, waxaad heli kartaa dalag cusub oo qajaarka ku dhowaad bil kasta.